သားလေးဖတ်ဖို့~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:13 PM | No မှတ်ချက် | Barlarlar
-စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုပဲ ရွေးလုပ်ပါ သား . သားစိတ်မဝင်စားတဲ့ အလုပ်ကို ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ပဲ တွန်းအားပေးနေပါစေ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ပြောပီး ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ငြင်းဆိုပါ ။.
-လူတွေကို အားမနာပါနဲ့ သား . အားနာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်က သားကို ဘယ်တော့မှ ကောင်းကျိုးမပေးဘူး
-လူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် မျှော်လင့်ချက် ကင်းကင်းနဲ့ ကူညီပါ . ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီက ဘာမှပြန်ပီး မမျှော်လင့်ပါနဲ့ -ဘဝမှာ "မှား"သွားမှာကို မကြောက်ပါနဲ့သား . လူတိုင်းမှားတတ်ကြပါတယ် . ဒါပေမဲ့မှားမှန်းသိရင် အမှန်ပြင်နိုင်အောင် တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားကြည့်ပါ
-လူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့ခါ သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာတွေ့ရင် ခံမငြင်းပါနဲ့ သား .သူတို့ပြောတာပဲ နားထောင်ပေးလိုက်ပါ
-Manual Gearနဲ့ ကားမောင်းတတ်အောင် သင်ပါ . ဘယ်ကားကိုမဆို မောင်းတတ်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ပာာ သိပ်ကို Style ကျတယ် အမေ့သား
-ကျန်းမာရေးအတွက်ရော body လှဖို့အတွက်ပါ အားကစားလုပ်ပါ သား . ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ပာာ ဘယ်နေရာသွားသွား လူတောသိပ်တိုးတယ် ငါ့သား -ရန်ဖြစ်ရင် သူများကို ဘယ်တော့မှစမထိုးပါနဲ့သား . သူကလာစထိုးရင်တော့ ပြန်ထိုးခဲ့ပါ .. ယောကျာ်းသိက္ခာကျတယ် အမေ့သား -ခရီးများများထွက်ပါ သား .သွားတိုင်းလဲ Camera တစ်လုံးယူဖို့မမေ့ပါနဲ့
ရောက်ခဲ့တဲ့ ဒေသတိုင်းရဲ့ အထင်ကရနေရာတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပီး ... ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို memory card ထဲ မသိမ်းထားပဲ photo album လေးတစ်အုပ်အမြဲထုတ်ပါ. အဲ့သည့်ဓါတ်ပုံတွေကို သားပြန်ထုတ်ကြည့်မိတိုင်း "ငါဒီနေရာတွေကို ရောက်ခဲ့ပါလား" ဆိုတဲ့ အတွေးက သိပ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ် -ရည်းစားအများကြီး ထားကြည့်ပါ သား . ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ပီးမှ တစ်ယောက်ထားပါ -သားချစ်သူကို ခဏခဏ ပန်းစည်းတွေ လက်ဆောင်တွေပေးပါ. ထို့အတွက်ကုန်ကျတဲ့ ပိုက်ဆံကို မနှမြောပါနဲ့. Romantic ဆန်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါစေ
-အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ မိန်းမကောင်းရှာယူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးမမွေးပါနဲ့သား . ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်သာကြိုးစားပါ .မိန်းမကောင်းတစ်ယောက် သားအတွက် အလိုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
-အိမ်ထောင်ဖက်ကို သားစိတ်တိုုင်းကျ သေသေချာချာရွေးချယ်ပါ . သားဘဝရဲ့ ၉၀% သော ပျော်ရွှင်မှုကို ဒီမိန်းကလေးဆီကပဲ ရမှာပါ. စိတ်ထားဖြူစင်ပီး သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ